Ubugcisa bokuhombisa indlu ngokufika kwengqele | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Ubugcisa bokuhombisa indlu ngokufika kwengqele
UJenny monge | 15/11/2021 10:00 | Ukuhonjiswa, Imisebenzi yasekhaya
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kubona ezininzi ubugcisa bokuhombisa indlu yethu ngokufika kwengqele. Kulo xesha ufuna ukubeka izibane zokuhlobisa, iingubo ze-chubby, i-cushions, njl ... ngokufutshane, zonke ezo zinto zibonelela ngomoya ofudumele kunye nekhaya.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezi zinto zobugcisa?
1 Ukuhlobisa inombolo ye-craft 1: I-garland yokuhlobisa kunye nezibane kunye neepompom.
2 Ukuhlobisa inombolo ye-craft ye-2: Isibane esincinci sentambo.
3 Ukuhlobisa inombolo ye-craft 3: izibane zeebhotile zeglasi
4 Ukuhombisa iCraft yeNombolo 4: Umbhoxo olukiweyo
Ukuhlobisa inombolo ye-craft 1: I-garland yokuhlobisa kunye nezibane kunye neepompom.
I-centerpiece enika ukukhanya okuthambileyo kunye neendwangu ezifudumeleyo yindlela efanelekileyo yokuhlobisa ngokufika kwebanda. Ifanelekile kwitafile yethu yegumbi lokutyela, kodwa iya kukhangeleka intle emnyango wendlu yethu.
Ungalibona inyathelo ngenyathelo lobu buchule ngokujonga kwikhonkco elingezantsi apho sichaza indlela yokwenza: IPom pom
Ukuhlobisa inombolo ye-craft ye-2: Isibane esincinci sentambo.
Esi sibane siya kunika ukukhanya okuthambileyo nokupholileyo xa ilanga litshonile suku ngalunye. Akhonto imnandi njengokuhlala esofeni ngengubo kunye nezibane ezithambileyo kwigumbi lokutyela.
Ungalibona inyathelo ngenyathelo lobu buchule ngokujonga kwikhonkco elingezantsi apho sichaza indlela yokwenza: Uyenza njani isibane somtya ngokulula
Ukuhlobisa inombolo ye-craft 3: izibane zeebhotile zeglasi
Apha uya kufumana iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokwenza izibane ngeebhotile zeglasi, ezongeza ekubeni zilula kakhulu, zihle kakhulu ukuhlobisa nayiphi na ishelufu.
Ungalibona inyathelo ngenyathelo lobu buchule ngokujonga kwikhonkco elingezantsi apho sichaza indlela yokwenza: Senza izibane ezimbini zokuhombisa ngeebhotile zeglasi kunye nezibane ezikhokelwayo
Ukuhombisa iCraft yeNombolo 4: Umbhoxo olukiweyo
Amalaphu athambileyo nathambileyo ayinto eqhelekileyo xa ingqele ifika.
Ungalibona inyathelo ngenyathelo lobu buchule ngokujonga kwikhonkco elingezantsi apho sichaza indlela yokwenza: Senza ibhedi yokuluka ngendlela elula
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Ukuhonjiswa » Ubugcisa bokuhombisa indlu ngokufika kwengqele
Iipakethi iimfama zeefestile zaseRoma eziyimfama
Iingqayi zeglasi ezinenkxaso yomthi